Ny Evanjelisitra Mouniz Aziz sy Jane Collins Daoud, mpanorina ny Fiangonana Jesosy Mamonjy.
Evangelists Mounir Aziz and Jane Collins Daoud, Founder of the Jesosy Mamonjy Church.
PENTEKOTISTA M.A DAOUD
"Fa aoka ho mpanatanteraka ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo." Jakoba 1:22
" FA ANTOMOTRA NY FARAN' NY ZAVATRA REHETRA; KOA MAHONONA TENA, ARY MIAMBENA AMIN' NY VAVAKA " I Petera 4:7
" FA IZAHAY KOSA HAHARITRA AMIN' NY VAVAKA SY NY FAMPIANARANA NY TENY " Asa 6:4
Jesosy Mamonjy Pentekotista M.A DAOUD
BP 1630 / Antananarivo 101- Madagascar
"Hariva sy maraina ary mitataovovonana no hivavahako sy hitarainako mafy; dia hihaino ny feoko Izy."
"(1) Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an' ny Avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny Tsitoha.
(2) Hilaza an'i Jehovah aho hoe: Fialofako sy batery fiarovana ahy Izy, Andriamanitro izay hitokiako.
(3) Hanafaka anao tokoa amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza Izy.
(4) Ny volon'elany no hanaronany anao, ary ao ambanin'ny elany no hitokianao; ho ampinga kely sy ampinga lehibe ho anao ny fahamarinany.
(5)Tsy hatahotra ny fampitahorana nony alina ianao, na ny zana-tsipika manidina nony andro.
(6) Na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitataovovonana.
(7) Hisy arivo ho lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao; nefa tsy hanakaiky anao izany."
Lahatsoratra nosoratan' ny Rev Jane Collins Daoud :
Ny Fiangonana JESOSY MAMONJY M.A DAOUD dia manaraka ny foto-pampianarana marina sy ny Fahamasinana hita ao amin'ny Baiboly izay notoriana sy nampianarin'ny Raiamandreny mpanorina Mounir Aziz Daoud mivady teto Madagasikara nanomboka ny taona 1961.
NB : Raha te-ahafantatra ny tantaran' ny fiandohan' ny Fiangonana JESOSY MAMONJY ianao dia tsindrio ny sary eto ambany izay mitondra ny lohateny hoe: " The beginning of the Jesosy M.A. Daoud Church of Madagascar 1961"
Raha liana ianao mba handre ny Tenin' Andriamanitra bebe kokoa izay hitondra famonjena ho an' ny fanahinao, fanasitranana ho an' ny nofonao, famahana ny olana rehetra eo amin' ny fiainanao dia manasa anao izahay mba hanatona ny adiresy manaraka:
Fiangonana Jesosy Mamonjy Pentekotista M. A. Daoud Ambohipo
P.O BOX 1630 / Antananarivo 101 - Madagascar
Ny ora fotoam-pivavahana dia ny:
* Alahady maraina amin'ny 8 ora sy sasany ny Sekoly Alahady; 9 ora sy sasany ny fivoriana
* Alahady hariva amin'ny 3 ora
* Talata 5 latsaka fefany hariva
* Alakamisy 5 latsaka fefany hariva
Nosoratan’ ny Anabavy M.A. DAOUD
( Nadikan’ ny Mpitandrina Razafimpianarana Joro)
… Misy laharan-dabilio 6 mitandahatra manerana ny fiangonana, miainga ery amin’ ny varavarana fidirana ka mipaka hatrety anoloan’ ny lapihazo. Ny laharana 3 eo ankavia dia hipoka lehilahy, ary ny laharana 3 eo ankavanana dia feno ireo ankizy sy ny vehivavy. Mihoatra ny 5 000 ny isan’ ireo olona manatrika tsy tapaka ny fivoriana. Deraina Andriamanitra!
Ny Alahady alina dia tahaka ireny fifohazam-panahy nisy tamin’ ny andron’ i John Wesley ireny, fa ny olona dia nahovitrovitry ny Herin’ Andriamanitra! Ny ankizy dia tena niaiky fahotana ka tonga voavonjy tamim-boninahitra. Nanjary toy ny afo niredareda izy ireo rehefa nijoro ho vavolombelona, tsy hafa noho ireny olon-dehibe ireny!
Antso ho amin’ ny fijoroana vavolombelona mikasika famonjena na fanasitranana no nanombohana ny fivoriana. Lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe no nirohotra nanatona ny lapihazo. Fijoroana vavolombelona feno voninahitra re izao! Ombieny ombieny ny mpiangona dia nihorakoraka nanome voninahitra an’ Andriamanitra noho ny zavatra nataony teo amin’ ny fiainan’ ilay mpanambara!
Tamin’ izay dia nisy zazavavy kely tokony ho 7 taona nanatona sady toran-kovitra noho ny Hery lehiben’ Andriamanitra, ny ranomasony nikoriana teo amin’ ny tavany , ireo tanany roa nasandrany ho amin’ ny lanitra. Natosany ara-bakiteny ny fiaikeny lalina ireo fahotany sy ny fomba namonjen’ i Jesosy azy, ary izay nataon’I Jesosy ho azy! Tsy iray na roa minitra fotsiny – feno dia feno ny fony hany ka niboiboika ireo teniny – haingana dia haingana mba ahazoany milaza ny zava-drehetra anatin’ ny 3 na 4 minitra. Ny Voninahitr’ Andriamanitra dia nampivadika ny teniny ho amin’ ny fiteny hafa. Nanomboka niteny tamin’ ny fiteny tsy fantatra araka izay nampitenenan’ ny Fanahy azy izy. Tamin’ izay dia nitambotsotra lavo noho ny Herin’ Andriamanitra izy sady niantsoantso fiderana an’ Andriamanitra.
Tsy nandaniana fotoana ela ny fampaherezana feno hosotra ho an’ ireo tsy mbola voavonjy tao am-piangonana. Fa nandritra ny 15 minitra, niaraka tamin’ ny firotsahan’ ny Voninahitr’ Andriamanitra no nitorian’ ny Anadahy Daoud sy nampaherezany ary nanomezany anjara ny tsirairay avy mba hiankohoka handoalika avy hatrany eo amin’ ny toerana misy azy mba hikatsaka an’ Andriamanitra.
VAVAKA RE IZAO!
Ianao efa mba nandre ireny orana mikapokapoka mafy ao an-tafontrano ireny, izay tsy aharenesanao na dia ianao miteny aza! Toy izany indrindra ny fireondreon’ ny vavaka
Nisy lehilahy iray nanomboka nipararetra toy ny ravinkazo ary tsy nijanona nandritra ny 30 minitra. Hatraiza hatraiza ny fiaikena fahotana. Etsy sy eroa dia miantsoantso an’ Andriamanitra ny olona mba hamonjy azy. Ny hafa manolotena feno kokoa ho an’ Andriamanitra. Ny sasany miteny amin’ ny fiteny tsy fantatra sady mitsangana mitoriteny eo amin’ ny toerana misy azy, ireo manodidina kosa dia mitohy mivavaka mandritra izany. Ny hafa indray mandihy sy miantsoantso noho ny Voninahitr’ Andriamanitra.
Afaka fotoana vitsy dia misy manoboka mihira. Mandrakariva izany dia mitarika ny olona hitsahatra amin’ ny vavaka sy hipetraka, fa tamin’ izao indray mandeha izao, tsy nitsahatra mihitsy ny vavaka!
Izao ny FAMANGIAN’ ANDRIAMANITRA.
Rehefa lasa ny 45 minitra ka nihanitony ny vavaka, na dia nambara tamin’ izy ireo aza fa afaka mamonjy fodiana izy raha tiany, ny tsirairay avy dia tsy te-hiala. Tsy misy te-hiresaka. Efa tafahaona tamin’ ny Mpampianatra tamin’ ny fomba tsara sy be voninahitra izy ireo hany ka izay hitarian’ ny Tompo azy no tiany.
AZONTSIKA ATAO VE NY MANANA FIFOHAZAM-PANAHY ANKEHITRINY?
Eny! Rehefa toriana ny tena fibebahana marina ary miatomboka ao an- tranon’ Andriamanitra ny fitsarana ireo misora-tena ho kristiana! Rehefa ny kristiana no miverina noana sy mangetaheta indray ny fahamarinana, ka hiady lalina ny fiainany manokana ary hanaisotra ireo fahalemeny manokana! Rehefa tonga toy ny zaza manana fo malefaka ireo ka azon’ ny Fanahin’ Andriamanitra hampiaikena ireo fahotany. “ HEVOY NY TOMBAMBORAKY NY FONAREO, hoy Andriamanitra ao amin’ ny Bokin’ Isaia, amin’ izay ANDRIAMANITRA VAO HANDATSAKA NY RANONORAM-PAHAMARINANA AMINAREO.”
Fa ny ranonorana milatsaka eo amin’ ny tany tsy voaasa dia tsy misy vokany. Mikoriana faingana izany ka tsy voafokan’ ny tany. Mialoha ny hambolenao VOA TSARA dia manadio ny taninao ianao aloha hialan’ ny “ AHIDRATSY SY NY TSILOTSILO ”. Rahefa izany dia mangady lalina ianao mba ahazoan’ ny tany MANDRAY NY HAMANDOANA!
Tsy maintsy misy tena fiasana lalina. Ianao no tsy maintsy manao izany amin’ ny alalan’ ny Tenin’ Andriamanitra eo anatrehanao – esorina ny fifosafosana, ny fanakianana, ny fieremana izay nahatonga olona masina maro ho lian-karena, te hahazo karama tsaratsara kokoa, zava-drehetra tsara kokoa – afa-tsy ny fiainana tsara kokoa ho an’ Andriamanitra!
Ny fihazakazahana ho amin’ ny harena no namono nahafaty ny alitaran’ ny mpianakavy.
Nisy anankiray tamin’ ireo tanora zazalahinay nahazo asa tao amin’ ny Banky lehibe iray teto Antananarivo. Io Banky io dia nanana “clients” sasany izay ifanaovany raharaha maizimaizina. Indray andro dia nirahina ilay tanora zazalahy hanatanteraka izany raharaha izany ankoatra ireo andraikiny ao amin’ ny Banky. NANDA AVY HATRANY IZY. Nampiantso azy ny lehiben’ ny Banky ka nanontany hoe: “ianao ve no mibaiko ato amin’ ity Banky ity sa izahay?”
“Ianareo tompoko, kanefa izany tsy midika fa tokony hanao zavatra mifanohitra amin’ ny feon’ ny fieritreretako aho.”
“Eny ary, indro ny karamanao fa tsy afaka hampiasa anao intsony izahay.”
Fa Andriamanitra kosa nampiasa an-drazazalahy ho mpitoriteny mahatoky sy vavolombelona mpitaona fanahin’ olona! Isaorana anie Andriamanitra!
Tianay ny hanana bebe kokoa ny fanatrehan’ Andriamanitra be voninahitra sy fandresen-dahatra matotra tsara avy amin’ ny Fanahy Masina eo anivonay. Rehefa miasa Andriamanitra, hatrany hatrany dia mandrotsaka fahamasinana ao am-po sy eo amin’ ny fiainana izy.
Izany fiovana izany dia TSY hoe FIVOARANA NA FANAPAHAN-KEVITRA taom-baovao. Izany karazana fiovana izany dia zavatra izay Andriamanitra irery ihany no afaka manatanteraka azy ao am-pon’ ny olona mitolo-batana tanteraka ho Azy!
MIARAHA MIVAVAKA aminay mba HANDROTSAHAN’ ANDRIAMANITRA NY FAHASOAVANY mitafotafo amin’ ny isam-piainana ka HATRAIZA HATRAIZA na lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe, na zazalahy sy zazavavy dia ho rafitra handohalika, hitalaho mba handray famonjena marina ho afaka amin’ ny fahotany rehetra. Haleloia!
Kristiana amin’ ny toerana maro no tsy ampy FAHASOAVANA eo amin’ ny asany! Vitsy dia vitsy no tena manana ny fahasoavana hanao tahaka izay ho nataon’ i Kristy rehefa eo anoloan’ ny fizahan-toetra na koa eo am pamolavolana zavatra andavanandro na fifampirarahana amin’ ny kristiana namana! Ireny olona ireny no mitanjaka, jamba sy fadiranovana raha mikasika ny fahasoavan’ Andriamanitra izay tena hamerana na AN’ I KRISTY isika na hariana tsy ho eo anatrehany! Apok 3:15-21. Andriamanitra eto tsy miresaka amin’ ny mpanota fa miresaka amin’ ny FIANGONANA – dia ireo mihevitra fa VOAVONJY, kanefa efa niverin-dalana tsy manana fanolorantena miredareda ho an’ Andriamanitra, dia ilay fanolorantena nanome azy ny tena fahasoavan’ Andriamanitra tao am-pony. Rehefa ao am-po ny fahasoavan’ Andriamanitra, ny molotra dia ho vainafo miredareda, vonona hipololotra fanambarana velona ny amin’ ny Fahasoavana sy Hery ary Fitiavan’ Andriamanitra ny mpanota mahantra izay very tsy mendrika ny fitahiany.
Aoka isika hanetry tena ka hanosotra ny masontsika amin’ ny odi-maso mba hahatsapa ny fihanjahanjantsika ka hibebaka!
“ RAHA NY OLOKO IZAY ANTSOINA AMIN’ NY ANARAKO HO AVY HANETRY TENA KA HIBEBAKA … amin izay fotoana izay dia HIHAINO ANY AN-DANITRA AHO… ka hanasitrana ny taniny …”
Ho voavaha ireo olana eo aminao, ary Andriamanitra hampody aminao ny FIFALIANA sy ny FIADANANA. ( vakio ny II Tantara 7:15.) Fa raha tsy hihaino ianao, dia fandravana azo antoka sy fahatezeran’ Andriamanitra no hianjera tsy ho ela tokoa amin’ ireo izay tsy miverina mikatsaka an’ Andriamanitra amin’ ny fony manontolo.
Ny tena fibebahana marina dia miaraka mandrakariva amin’ ny famerenana zavatr’ olona sy fanitsiana izay diso tamin’ ny namantsika. Ny fiaikena fahotana amin’ ny olona nataontsika tonga tafintohina dia mahatsara foana ny fanahintsika. “Diovy ny tananareo ry mpanota, tsy handray kolikoly na vola azo amin’ ny tsy fahamarinana.” Amin’ izay fotoana izay Andriamanitra dia hamindrafo aminareo … Aza miandry fibebahana eo am-pialana aina. Mety tsy hanana fotoana intsony hanadiovana ny tananao amin’ izay tsy anao ianao. Aoka hihavana amin’ Andriamanitra ianao, ka ataovy izay ahazoana antoka ny fiantsoana anao ANIO!
ANIO Andriamanitra no miandry te-hamonjy anao. Rahampitso Izy mety ho Mpitsara Mahery mandrakizay anao, izay hanipy ny ratsy fanahy any amin’ ny helo!
Tsindrio tsirairay ny rohy etsy ambany raha te-hijery ireo sarin' ny famangiam-piangonana tamin' ny toerana samihafa:
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambositra
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Antsahabe
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ankadifotsy
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Antsirabe
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambatotsipihina
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambohimalaza
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambohimamory
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Ambatofotsy
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Nosy-Be
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Sandravola
- Fiangonana Jesosy Mamonjy M.A. DAOUD Vontovorona
" E! andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra ny olona izay matoky azy." Salamo 34:8
IREO FOMBAM-PAHASOAVANA HITEHIRIZANA NY FIAINAM-PANAHY
1 - Hivavaka mandrakariva:"Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy noho izany, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka," Lioka 18:1
2 - Hamaky Baiboly isanandro: "Tsy ny mofo ihany no hiveloman'ny olona, fa ny tenin' Andriamanitra rehetra.." Lioka 4:1b
3 - Hijoro vavolombelona amin'ny hafa
4 - Ho tonga any an-tranon' Andriamanitra hatrany: " Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon'ny sasany," Hebreo 10:25a
5 - Hanome izay anananao na ho an'Andriamanitra na ho an'olona